Moderatka oo soo jeediyay adkeeynta qaadashada dhalashada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Basaborka Sweden. sawir: Rikspolisstyrelsen
Moderatka oo soo jeediyay adkeeynta qaadashada dhalashada
Doodda xeerarka qaadasho ee muwaadin-nimada Sweden
La cusbooneeyay torsdag 7 september 2017 kl 14.05
La daabacay torsdag 7 september 2017 kl 08.46
Xisbiga Moderaterna ayaa soo jeediyay fikirka ah in la adkeeyo qaadashada muwaadin-nimmada Sweden.
Xisbiga M ayaa sidoo kale soo ban-dhigay in la bixiyo abaal-marin is dhex gal "integrationsbonus". Xeerarka arrimmahaa ugu degsan dalka Sweden waa in lala barbar dhigo ama loo ekeeysiiyo xeerarka ka jira waddammada dhaca waqooyiga Yurub iyo Jarmalka, sida ey maqaal ku daabaceen war-geeyska Dagens Nyheter qaybtiisa doodda (DN Debatt) Tomas Tobé iyo Gunnar Strömmer.
Waa in shuruudo lagu xiro qaadashada muwaadin-nimada dalka, kuwaasina oo ey ka mid yihiin aqoonta aasaaska luuqadda iswiidhishka iyo sidoo kale aqoon loo leeyahay mujtamaca. Aqoontaa waxaa lagu muujin karaa imtixaanno la iska qaado aya shahaadooyin la ictiraaf-san yahay ee laga hantiyaey maadooyin jaamicadaha lagu dhigtay. Dood abuureyaasha ayaa sidoo kale soo jeediyey in dib loo eego fikir la soo ban-dhigey sannadkii 1974 ee la xiriiray baarista in shakhsigu kifaalo qaadi karo noloshiisa. Waa arrin la xiriira in nolol maalmeedka shakhsiga aanay inta badan ku xirnayn taageerada dhaqaale.
Sidoo kale in laba sannadood oo dheeri ah lagu daro muddad loo baahan yahay inay ka soo wareegtay si xaq loogu yeesho qaadashada muwaadin-nimmada Sweden. Toddoba sannadood oo dalka lagu dhaqan yahay iyo lix sannadood dadyoowga qaxootiga ee aan waddan (dhalasho) lahayn - statslösa.
Waxaa sidoo kale la soo ban-dhigey in abaal marin is-dhex gal "integrationsbonus" lagu soo rogo dadyoowga aqoonta u leh luuqadda iswiidhishka, isla markaana kaafiya noloshooda iney muwaadin-nimada qaadan karaan saddex sannadood ka hor. Tobé iyo Strömmer ayaa sidoo kale aamin-san in baaris loo saaro suurtagalka ah in muwaadin-nimada dib loogala laaban karo ”xaaladaha culus qaarkood”, sida tusaale ahaan dunuubta falalka argagixisada.
Xisbiga M wuxuu sidoo kale soo jeediyay ciqaab ka culus ee lagu rido cidda fal xumada u adeegsata safarrada dal ku galka (baasaboorka) waddanka.
Xisbiyada ku bahoobay xukuumadda ayaa aamin-san in xeerka ka deg-san muwaadin-nimmadu yahay mid miisaaman.
Halka uu hoggaamiyaha xisbiga Vänsterpartiet Jonas Sjöstedt sheegay inuu dhab ahaan uga soo hor-jeedo fikirka uu soo ban-dhigay xisbiga Moderaterna ee kala noqoshada muwaadin-nimada Sweden:
-Waxaannu leenahey xeerar oraneya in haddii uu shakhsigu galo dembiyo culus laga masaafurin karo dalka. Waxaannu u aragnaa mid wanaag-san. Hase yeeshee kolka la qaato muwaadin-nimada dalka waa la siman yahay. Haddii kale waa in iyagana lagala noqdaa dal ku galka kuwii waa hore qaatay. Waxaa dhaceeysa inay muwaadin-nimadu noqoto mid aan sineeyn ee A iyo B, sida uu sheegay Jonas Sjöstedt, hoggaamiyaha xisbiga Vänsterpartiet.